Dhibaatada Algeria: Walaalkii hore ee Madaxweynihii hore iyo Laba Sirdood oo Hore Looga Xidhay Xeeladaha - TELES RELAY
ACCUEIL » SIYAASADDA • DIB U EEGID AFRICAN PRESS • COMPANY Dhibaatada aljeeriya: Walaalkii madaxweynihii hore iyo laba madax oo hore oo sirdoon ah ayaa la qabtay
Algeria CRISIS: Walaalkii madaxweynihii hore iyo laba macalimiin hore oo sirdoon ah ayaa la xidhay
ALEXIS WAYAN 5 May 2019
Siciid Bouteflika, madaxa adeega qarsoodiga ah iyo isku duwaha hore ee sirdoonka ayaa walaac ka qaba. Sababta loo xiray xarigahan lama yaqaan.
Siciid Bouteflika, oo ahaa lataliyihii hore iyo walaalkiis Madaxweynihii Aljeeriya Abdelaziz Bouteflika iyo laba sarkaal oo ka tirsan saraakiisha sirdoonka ee hore ayaa la xiray sabtidii, ilo amaan ah ayaa AFP u sheegtay.
il Tani, si kastaba ha ahaatee, ma sheeg sababaha xadhiga Said Bouteflika, General Mohamed Mediène sheegay Toufik, oo madax ka ah adeeg qarsoodi Algeria inta lagu guda jiro 25 sano, iyo iskuduwaha hore ee sirdoonka Athmane Tartag aka "Bashir ".
Sida laga soo xigtay warbaahinta Faransiiska Dhamaan Algeria, "Waxay haatan imtixaan ka qaataan adeegyada ISB, oo qayb ka ah baaritaanka hawlaha, kuwaas oo ay ku cambaareeyeen madaxa shaqaalaha PNA", Ciidanka Qaranka.
Kharashka khasabka ah
A de facto nin xooggan oo dalka ka mid ah tan iyo markii uu ka tagay madaxweynihii hore, kaas oo uu ahaa taageere taageersan oo hore u ahaa, madaxa taliyaha ciidamada, General Ahmed Gaid Salahayaa su'aal ka keenay todobaadyadii la soo dhaafay General Toufik ee shirqoolka loogu talagalay sida uu qabo Algeria. Bartamihii bishii April, uu "bilaabay digniin kama dambays ah" in madaxa taariikhi hore ee Waaxda Sirdoonka iyo Ammaanka (Drs), adeegyada qarsoon Algerian saameynta kala diri ee 2016, taas oo uu ku eedeeyay in "shirqool" si " caqabad ku ah xalalka dhibaatada ka taagan ".
AKHRIYO ALSO >> Algeria: "Qabiilka Bouteflika, ciyaarta waa ay dhammaatay"
Sida for Siciid Bouteflika, Taliyaha Shaqaalaha Ciidanka eedeeyay isaga, oo aan isaga magacaabayo "in uu noqdo madaxa Issaba ah (Makaad), kuwaas oo la wareegay awoodda madaxweynaha," ayuu yiri All About Algeria. Sida laga soo xigtay wasiirka hore ee gaashaandhigga, General Khaled Nezzar, Said Bouteflika ka mid ah la xiriiray lahaa ka hor iska casilay walaalkiis si loo abuuro "xaalad ah go'doominta ama xaalad degdeg ah" jeeda bannaanbaxyo ka.
Sababaha loo xiray Athmane Tartag waa mid aan caddayn. Sida laga soo xigtay Le Figaro, wuxuu iska casilay xilkiisa Iskuduwaha adeegga isla maalinti sida Bouteflika oo sidaas darteed loo tixgelin karo qayb ka mid ah "wareegyada 'shirqoolayaasha lagu cadeeyay hoggaamiyaha ciidanka.
Baaritaano badan oo furan
Tan iyo iscasilaadda on April 2 Madaxweyne Abdelaziz Bouteflika, cadaadis dhaqdhaqaaqa weyn dibad caan ah, caddaaladda ayaa sidoo kale furay baaritaan ka dhan ah dhowr ganacsato ku xiran tahay qabiil hore ee madaxtooyada. Issad Rebrab, Nasiib ugu weyn ee dalka, gaar ahaan la xidhay April 23 ah. SOURCE: https://www.lexpress.fr/actualite/monde/afrique/algerie-le-frere-de-l-ex-president-et-deux-ex-patrons-du-renseignement-arretes_2076355.html
Waa kuwan falalka ay Cameroonku ku fashilmeen inay galaan - CAMEROON MAGAZINE
30 04 AFRICA REVIEW REVIEW - Video